Ngeentlanzi yiwebhusayithi ye-Intanethi ye-AB, ekhethekileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zeentlanzi ezikhoyo kunye nokhathalelo abaludingayo. Ukuba ufuna ukufunda ukuba ungazinyamekela njani ngokuchanekileyo siya kukufundisa ukuba ungayenza njani ukuze ukonwabele ii-aquariums ngendlela engazange ibekho ngaphambili. Ngaba uza kuyiphosa?
Iqela labahleli beDe Peces lenziwe liqela labathandi bentlanzi bokwenyani, abaya kuhlala bekunika elona cebiso lililo ukuze ukwazi ukubanyamekela. Ukuba unomdla wokusebenza nathi, gcwalisa le fomu ilandelayo Kwaye siya kunxibelelana nawe.
Ukufundisisa isayensi yendalo esingqongileyo kwandinika imbono eyahlukileyo ngezilwanyana kunye nokunyamekelwa kwazo. Ndingomnye wabo bacinga ukuba unokuba nentlanzi njengezilwanyana zasekhaya, ukuba nje banikwa ukhathalelo ukuze iimeko zabo zokuhlala zifane nezinto eziphilayo zendalo, kodwa ngaphandle kokukhubazeka ukuba kufuneka baphile kwaye bafune ukutya. Ilizwe leentlanzi linomdla kwaye kunye nam uya kuba nakho ukufumana yonke into ngalo.
NdingumColombia, umthandi wezilwanyana ngokubanzi kunye nentlanzi ngokukodwa. Ndiyakuthanda ukwazi iintlobo ezahlukeneyo, kwaye ndifunda ukuzikhathalela kangangoko ndinako kwaye ndiyazi ukuze ndizigcine zisempilweni kwaye zonwabile, kuba iintlanzi, nangona zincinci, zifuna ukhathalelo ukuze zilunge.
Iintlanzi zezizidalwa ezimangalisayo onokuthi ulibone ngazo kwelinye ilizwe ukuya kwinqanaba lokufunda okuninzi malunga nokuziphatha kwazo. Ihlabathi lezilwanyana linomdla njengehlabathi labantu kwaye ezininzi zazo zikunika uthando, inkampani, ukuthembeka kwaye ngaphezu kwako konke zikufundisa ukuba ngamaxesha amaninzi banokuthatha umphefumlo wakho. Nangona kunjalo, akufuneki silibale iintlanzi kunye nokuziphatha kwabo, yiyo loo nto ndilapha, ndikulungele ukwabelana ngeli hlabathi limangalisayo.
Ukuthanda indalo kunye nehlabathi lezilwanyana, ndiyakuthanda ukufunda kunye nokuxelela izinto ezintsha malunga neentlanzi, izilwanyana ezinokubakho, kodwa zinobudlelwane. Kwaye ukuba uyayazi indlela yokubaphatha, ngokuqinisekileyo iintlanzi zakho ziya kuba zilungile ebomini.
Kudala ndiyithanda intlanzi. Nokuba kushushu okanye kuyabanda, kumnandi okanye kunetyuwa, zonke zinempawu kunye nendlela yokuba ndiyifumene inomdla. Ukuxelela yonke into endiyaziyo ngeentlanzi yinto endiyithandayo.
Ndiyathanda ukubhukuda i-snorkel kunye nokudada elwandle xa kungekho jellyfish. Phakathi kwabemi bam baselwandle endibathandayo ngookrebe, bahle kakhulu! Kwaye babulala abantu abambalwa kakhulu kunekhokhonathi!
Ndiyakonwabela ukubhala ngezilwanyana kwaye ndinomdla wokwazi malunga nehlabathi lentlanzi, nto leyo indikhokelela kuphando kwaye ndifuna ukwabelana ngolwazi lwam malunga nazo.
Ndazalwa ngo-1981 kwaye ndiyazithanda izilwanyana, ngakumbi iintlanzi. Ndiyathanda ukwazi yonke into ngabo, hayi kuphela indlela abazikhathalela ngayo, kodwa nendlela abaziphethe ngayo umzekelo. Banomdla kakhulu, kwaye ngenkathalo encinci banokuvuya ngokwenene.